Monday August 16, 2021 - 15:35:40 in Wararka by Liibaan Jeexoow
guulaha waaweyn ee Alle siiyay mujaahidiinta waxaa gadaal ka taagan hoggaamiyaal cabaaqira ah kuwaas oo hurdada ku ladi waayay inta taako kamid ah dhulalka muslimiinta ay shisheeyuhu ku amar ku taaklaynayaan.
Daalibaan ama imaarada Islaamiga ah waxay maraysaa waqtigii ugu wanaagsanaa taariikhdeeda 20 sano kadib oo dagaal adag ay lasoo gashay dowladaha ugu waaweyn reergalbeedka iyo khawanada daba dhilifyada ah.
Haddaba waxaa lays weydiinayaa yaa usha uhaya jihaadka Afghanistan ee madaxa dhulka ugu jiiday america iyo xulufadeeda.
1-Almulla Heybatullaah Akhwanda Zaadah waa amiirka imaarada Islaamiga ah, ka hor intii uusan amiirka noqon wadaadkan taariikhdiisa waxbadan kama aqoonin warbaahinta iyo dowladaha reergalbeed ee raadgura hoggaannada jamaacaadka jihaadiga ah.
Sanaddii 2016 ayaa Heybatullaah loo magacaabay amiirka imaarada Islaamiga ah maalmo yar kadib markii uu duqeyn american ku shahiiday Mulla akhtar Mansuur oo ahaa amiirkii imaarada.
heybatullaah ayaa horay u ahaa mas'uulka ugu sarreeya qadaha imaarada waxayna falanqeeyayaashu sheegi jireen in uu yahay nin kaalin weyn ku yeelan kara hoggaanka imaarada.
Waa sheekh caalim ah oo si aad ah ay u ixtiraamaan ciidamada mujaahidiinta iyo mas'uuliyiinta kale waa nin zaahid ah oo aan israac raacin dhaldhalaalka adduunyada, akhwanda aabihii wuxuu caalim diimeed oo kasoo jeeda gobolka qandahaar oo ah ubucda qabiilka baashtuunka ee dega koonfurta dalka Afghanistan.
markii uu shahiiday mulla akhtar mansuur ayuu heybatullaah dusha uritay mas'uuliyad xasaasi ah taasi oo aheyd midaynta sufuufta mujaahidiinta waxaana la sheegaa in uu ku guuleystay muhiimadaas.
inta badan warbaahinta kamasoo muuqdo codkiisana lagama maqlo marka laga reebo maalmaha barakaysan ee ciidaha oo uu lahadlo umadda muslimka ah gaar ahaan reer afghanistan.
2-Almulla Cabdulqani Baraadar wuxuu kamid yahay mas'uuliyiinta ugu saameynta badan imaarada islaamiga ah waa mujaahid taariikh facweyn ku leh jihaadka caalamiga ah gaar ahaan afghanistan.
Ninkan wuxuu ku dhashay wilaayada Uruzqaan ee koonfurta dhacda wuxuuna kusoo barbaaray qandahaay waa mid kamida raggii budhigga u ahaa Xarakada Daalibaan waxay aad isugu dhowaayeen Amiirul mu'miniin Mulla Max'med Cumar Mujaahid kaasi oo shahiiday sanaddii 2013.
Markii ay ciidamada saliibiyiinta Mareykanka iyo NATO ay qabsadeen afghanistan ayuu Baraadar kamid noqday saraakiishii abaabulay oo dib usoo noolooyeeyay jihaadka isagoo kaalin weyn kulahaa macaariktii lagu riiqay saliibiyiinta.
sanaddi 1979-kii isagoo noloshiisa caadiga ah kujira ayuu midowgii suufiyeeti afghanistan ku duulay kolkaas ayuu go'aansaday in uu fadhiga ka kaco wuxuuna kamid noqday mujaahidiintii ugu horreeyay ee shuuciyadda wajahay.
Sanaddii 2010 isagoo ah Taliyaha guud ee ciidamada daalibaan ayaa lagu xiray magaalada Karaaji ee dalka Pakistan wuxuuna xirnaa illaa sanaddii 2018-kii kolkaas ayuu dib ugu laabtay jihaadka.
isla sanadkaas ayuu hoggaanka sare ee imaarada umagacaabay in uu hoggaamiyo maktabka siyaasadda daalibaan kaasi oo wadahadallo dheer lagalay Mareykanka wuxuuna ahaa mas'uulkii dhanka mujaahidiinta usaxiixay heshiiskii horseeday in NATO iyo Mareykanka ay isaga baxaan wadanka.
3-Siraajudiin Xaqaani waa mid kamida mas'uuliyiinta ugu saraysa imaarada islaamiga, waa wiilka jalaaludiin xaqaani caalamkii mujaahidka ee caanka ka ahaa dhulka khuraasaan.
Ninkan waa ku xigeenka amiirka ama mas'uulka labaad ee imaarada reer galbeedku waxay ku eedeeyeen in uu madax u yahay shabakad ay ugu yeereen xaqaani oo jihaadka caalamiga ah qarash garaysa.
dowladda Mareykanka waxay sheegtaa in qoyska siraajudiin ay ciidamada americanka iyo kuwa NATO si adag ugula dagaallameen afghanistan 20kii sano ee lasoo dhaafay ayna mas'uul ka ahaayeen iqtiyaalaat loo geystay mas'uuliyiin iyo qafaalka dad reergalbeed ah.
4-Almulla Yacquub waa wiilka Amiirul mu'miniin Mulla Cumar mujaahid, ninkan waa madaxa guud ee ciidanka melleteriga Taalibaan waa ninka mas'uulka ka ah futuuxaadka hadda socda iyo malaaximtii sanadadii lasoo dhaafay afghanistan ka dhacayay.
Yacquub wuxuu qaaday wadadii aabihii isagoo marwalba ka shaqeeya midnimada umadda.
imaarada islaamiga ah waxay leedahay mas'uuliyiin kale oo hoggaanka uhaya sirdoonka,maaliyadda,iclaamka iyo arrimo kale oo xasaasi ah balse warbaahintu waxba kama oga rasmi ahaana iclaamka mujaahidiinta loogama sheego.
Dowladdii ugu horraysay oo aqoonsatay Xukuumadda islaamiga Afghanistan.
Alkata'ib oo baahin doono muuqaallo taxane ah oo lagu gorfgeyn doono Dastuurka DFS iyo Xeerka Ciqaabta Soomaaliyeed.
Sidee udhacay bixitaanka Askarigii ugu dambeeyay ee Amerikaanka wadanka Afghanistan [Warbixin].